Amiirka dalka Qadar oo la kulmaya madaxwaynaha Turkiga | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Amiirka dalka Qadar oo la kulmaya madaxwaynaha Turkiga
Amiirka dalka Qadar oo la kulmaya madaxwaynaha Turkiga
Amiirka dalka Qadar Sheekh Tamiim bin Xamad Al-thaani, ayaa lagu wadaa inuu u ambabaxo dalka Turkiga, taasi oo ah safarkiisii ugu horeeyay uu dibadda u aado tan iyo intii uu bilowday qalalaasaha ka taagan dalalka gacanka Carabta.
“Amiirka ayaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato Madaxwaynaha dalka Turkiga Reccep Tayyip Erdogan, ayagoo ka wada-hadli doona xiriirka labada dowladood Qadar iyo Turkiga sidoo kalena waxaa ay ka arinsan doonaan arimo ku aadan xaaladaha gobalka ” sidaa waxaa lagu sheegay war kasoo baxay xafiiska Madaxwaynaha Turkiga oo ay heshay warbaahinta Ummaddamedia.
Madaxwayne Erdogan, ayaa ahaa taageeraha ugu wayn ee Qadar lahayd tan iyo intii uu bilowday khilaafka gacanta 5 bishii June ee sanadkan, xiiligaasi oo dalal carbeed oo ay ka mid yihiin Sacuudi Carabiya, Imaaraadka Carabta, Masar, Baxrayn iyo kuwo kale ay xiriirka u jareen islamarkaana cunoqabatayn dhanka Hawada, Dhulka iyo Biyaha ay kusoo rogeen dalka Qadar.
Isbahaysiga Carabta ah ee Qadar cunoqabateeyay ayaa waxaa ay dalkaasi ku eedeeyeen inuu taageero ‘Argagaxiso’ eedaymahaasi oo Qadar kaashaanka ku dhufatay.
Dowladaha Turkiga iyo Iiraan ayaa midnimo u muujiyay Qadar, ayagoo ka taageeray dhinaca cuntada.
Sacuudi Carabiya iyo xulafadeeda oo soo saaray qodobo Qadar ay kula heshiin karaan ayaa waxaa ka mid ahaa in la xiro xerada Militari ee Turkiga ku leeyahay Qadar iyo in albaabada loo laabo television-ka aljazeera qaybsiisa Carabta la hadasha.
Previous articleDowladda Soomaaliya & Hay’adda ICAO oo heshiis dhexmaray
Next articleShirka golaha wasiirada oo looga hadlay doorashooyinka 2020